रोजा रिबास। द गुड चिल्ड्रेनको लेखकसँग अन्तर्वार्ता वर्तमान साहित्य
रोजा रिबास। द गुड चिल्ड्रेनको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
रोजा रिबास द्वारा फोटो। ट्विटर प्रोफाइल
रोजा रिबास को निर्माता छ कर्नेलिया वेबर-टेजेडोर en दुई पानी बीच, la १ 50 s० को त्रिकोण (लेखक सबिन होफम्यानसँग पहिले नै चार हातहरू) द्वारा बनाईएको जिब्रो को उपहार, महान चिसो र नौसेना निलो, सबै कालो कट। तर पनि हस्ताक्षर पेंशन लियोनार्डो, नेरसाइट जासूस, मिस फिफ्टी o खानाहरूमा चन्द्रमा। र अब उनीसँग छ Hernandez, जासूस परिवार जसले स्टार सबै धेरै परिचित चक्कर y राम्रो छोरा, जुन यस वर्ष बाहिर आयो।
म धेरै धेरै धन्यवाद! यो अन्तर्वार्ता जुन तपाईंले मलाई समर्पित गर्नुभयो, तपाईंको दया र ध्यान। यसमा उनले हामीलाई आफ्नो पहिलोदेखि नै सबै कुराको बारेमा अलिकता बताउँछन् प्रभावहरु, उनीहरूको माध्यमबाट जाँदै लेखकहरू मनपर्ने र नयाँ परियोजनाहरू तपाईंले योजना बनाउनु भएको छ, साथ साथै समग्र प्रकाशन ल्याण्डस्केपमा एक नजर लानु भएको छ।
रोजा रिबास - अन्तर्वार्ता
रोजा रिबास: मलाई यो पहिलो किताब याद छैन। दुई कभर दिमागमा आउँछन्: कालो corsair Emilio Salgari द्वारा, पुस्तक जुन म अझै राख्छु र भण्डारको रूपमा राख्छु। मलाई थाहा छैन म यो पुस्तक पढ्न कति पटक गएँ। र अर्को एनिड ब्लिटन, सबै पाँच जना समस्यामा छन्, मलाई लाग्छ कि यो थियो।
पहिलो कथा मैले सम्झें मैले लेखेको हुनुपर्छ जब म करीव १० बर्षको थिएँ। यो एक थियो प्लाज्मा मर्न नचाहने गोरुको बारेमा भयानक भावनात्मक र नाटकीय कथा। मलाई याद छ कि मैले यो कक्षामा लेखेको थिए (शिक्षकले मलाई लेख्न लगाउँथे त्यसैले म केही समय शान्त रहन सक्थें) र त्यसपछि मैले पूरै कक्षाको अगाडि पढ्नुपर्‍यो। सब भन्दा राम्रो कुरा भनेको यो थियो कि मलाई मनपर्ने केटो (हेलो, क्विक!) पढाइको अन्तमा गोप्य रूपमा एउटा आँसु पखायो।
आरआर: यदि मैले सहि सम्झना छु भने, पो द्वारा कथाहरूको पुस्तक, जुन शायद म धेरै चाँडै पढें र मलाई रातको डरको कारण भयो।
RR: जोन इरभि।। मेरो एक मनपर्ने लेखक मलाई धेरै लामो उपन्यास मनपर्दैन, तर इरभि withको साथ म एक सय वा दुई सय पृष्ठहरूको लागि जान सक्छु।
आरआर: मैले बहादुरलाई भेट्न मन पराउथें सैनिक Schwejk, Jaroslav Hasek द्वारा र उहाँ संग केहि बीयर छ। र रिप्ले हाईस्मिथबाट सिर्जना गर्नुहोस्।
आरआर: म हात र पेन्सिल द्वारा लेख्छु। त्यसो भए म यसलाई कम्प्युटरमा दिन्छु
आरआर: महामारीको अघि, मैले क्याफेमा लेख्न सुरू गरें। अब मैले काम सुरु गर्न सिकेको छु मेरो डेस्क.
AL: तपाईंलाई मनपर्ने अन्य विधाहरू?
आरआर: मेरो कुनै प्राथमिकता छैन। म राम्रो अराजक पाठक र सबै प्रकारको पठनका लागि खोल्नुहोस्।
आरआर: मसँग सधैं छ एकैचोटि धेरै पुस्तकहरू। म पढ्दैछु पोलिस पोष्टर एडुआर्डो हाफन द्वारा, अझै जीवनलुइस पेनी र द्वारा Aberteurliche Reise dर्च mein Zimmerकार्ल-मार्कस Gauß द्वारा। En यी क्षणहरू म छोटो उपन्यास समीक्षा गर्दैछु। तर अधिक म गणना गर्न सक्दिन।
आरआर: जटिल, यद्यपि यो धेरै लेखकहरू छैनन् भनेर होईन, तर अधिक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप मा प्रकाशन मा आफ्नो रुचि बनाउँछ। जुन, अर्कोतर्फ, यस तथ्यसँग मेल खान्छ कि त्यहाँ प्रकाशनका लागि थप विकल्पहरू पनि छन्।
AL: के हामीले सामना गरिरहेका संकटको क्षण तपाईंको लागि गाह्रो भइरहेको छ वा भविष्यका उपन्यासहरूका लागि केहि सकारात्मक राख्न सक्षम हुनुहुनेछ?
आरआर: ठीक छ, मेरो पेशेको कारण, म एक्लोपसनको लागि ब्यस्त छु, काम गर्ने कोठामा धेरै घण्टा खर्च गर्न। तर यो सँधै स्वैच्छिक बन्धनमा परेको छ। अब, महामारी को धेरै महिना पछि, हामी थकान थियौं जुन हामी सबैले साझेदारी गर्छौं. यदि मैले यसबाट केहि सकारात्मक प्राप्त गर्ने भनेर थाहा पाउन मसँग अझै परिप्रेक्ष्यको कमी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » रोजा रिबास। द गुड चिल्ड्रेनको लेखकसँग अन्तर्वार्ता
मुटु जुन मसँग छ